Mila manokana vola iadiana amin’ny Sida ny fanjakana | NewsMada
Mila manokana vola iadiana amin’ny Sida ny fanjakana
Par Taratra sur 26/05/2016
Ezaka tokony hataon’ny mpisehatra rehetra miady amin’ny fanafoanana ny VIH/Sida eto amintsika ny fanentanana ny olona hanao fitiliana ra hamantarana ny mitondra ny tsimokaretina izy na tsia. An-tsitrapo ny fitiliana ka izay mahatsapa fa ilaina ny mahalala ny toe-pahasalamany sy ireo voatery noho ny antony samihafa no manao izany. Antony faharoa mbola mahabetsaka ny olona mitondra ny tsimokaretina amin’ny faritra sasany ny tsy mbola fisian’ny fitaovam-pitiliana amin’ny CSB. Amin’ny ankapobeny, tsy miova ny taha fa avo izany ho an’ny vondron’olona marefo toy ny mpivarotena, ny lehilahy manao firaisana amin’ny lehilahy mitovy aminy, ny olona mandray zava-mahadomelina amin’ny alalan’ny tsindrona. Ny tanora amin’ireo sokajy telo ireo no ahina betsaka.
« Manohana ara-bola ny ady amin’ny VIH/Sida ny ONU/Sida sy ny OMS. Nanomboka ny taona 2010, nihena ny vola natokana iasana amin’ny ady. Afaka 15 taona, hitsahatra tanteraka ny famatsiam-bola amin’ireo mpiray ombon’antoka mahazatra. Mila mihetsika ny fanjakana tsirairay mitady loharanom-bola avy amin’ny herin’ny tenany hividianana fanafody sy iasana. Noho ny fihenan’ny famatsiana, mila mahomby ny asa ary miantefa mivantana amin’ny vondron’olona marefo ahina hahazo ny tsimokaretina haingana noho ny fitondran-tenany », araka ny fanazavan’ny talen’ny ONU/Sida aty amin’ny ranomasina Indianina, Salvator Niyonzima. Isan-taona, mahatratra 26 miliara dolara ny vola ilaina hampihodinana ny asa sy hividianana fanafody ARV raha tiana ho tratra ny tanjona hanafoana ny VIH hatramin’ny taona 2030. Hisy fihaonan’ny firenena mpikambana, ny 8-10 jona, handinihana ny lalana hizorana indray amin’ny ho avy hahatrarana ny fanafoanana ny Sida ny taona 2030. Hanao fanambarana miaraka ny firenena rehetra mpandray anjara momba ny paikady vaovao ka anisany i Madagasikara.
38 000 mitondra ny tsimokaretina VIH nefa tsy mahalala akory
0,3% ny tahan’ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH/Sida eto amintsika, araka ny fanazavan’ny sekretera mpanatanteraka ao amin’ny CNLS, Andrianiaina Harivelo, omaly. 1 828 ny olona efa voatily fa mitondra ny tsimokaretina sy manaraka fitsaboana, taorian’ny fanadihadiana ny volana desambra 2015. Manodidina ny 40 000 ny isan’ny olona mitondra ny tsimokaretina, araka ny kajy nataon’ny teknisianina ka ny 38.000 izany amin’izao fotoana izao, tsy mahalala ny toe-pahasalamany ka mamindra amin’ny hafa raha tsy mampiasa fimailo fiarovana.